हरिबोधिनी एकादशी आज: यस्तो छ शास्त्रीय मान्यता - OK Khabar
हरिबोधिनी एकादशी आज: यस्तो छ शास्त्रीय मान्यता
ओके खबर २९ कार्तिक २०७८, सोमबार ०७:२० मा प्रकाशित ( २ महिना अघि) २८ पाठक संख्या
काठमाडौँ । कार्तिक शुक्ल एकादशीका दिनमा भगवान् विष्णुको प्रतीकका रूपमा तुलसीको दामोदरसँग विवाह र विशेष पूजा गरी मनाइने हरिबोधिनी एकादशी पर्व आज मनाइँदैछ ।
हरिशयनी एकादशीका दिन घरघरमा रोपेर विशेष पूजा गरिएको तुलसीको मठमा गाईको गोबर र रातो माटोले पोतेर सिँगारी फूल मालाले सजाएर आज विवाह गरिन्छ । तुलसी विष्णु प्रिया भएकाले यस दिन तुलसीको दामोदरसँग विवाह गर्ने परम्परा बसेको हो । तुलसीको मठ नजिकै विष्णुको प्रतीकका रूपमा निगालाको लिङ्ग गाडेर विधिपूर्वक पूजा गरिन्छ । कार्तिक महिनाभर सबै देवदेवी तुलसीमै निवास गर्छन् भन्ने धार्मिक विश्वास छ ।
आदिकालदेखि पूजाको परम्परा बसेको तुलसीको महिमा वैज्ञानिकरुपमा पनि लाभदायक प्रमाणित भएको छ । यसैले तुलसीको मठ हुने घरलाई तीर्थ समान मानिन्छ । तुलसीको सुगन्धले दश दिशा पवित्र हुन्छ भनिन्छ । तुलसीको पूजा गरिएको घरमा यमदूत पनि पस्दैनन् भन्ने आस्थाका कारण हिन्दु धर्मावलम्बीले घरमा तुलसीको मठ बनाउँछन् ।
तुलसीबाट बनेको चिया मानव शरीरमा रोग प्रतिरोधी क्षमता वृद्धि गर्न उपयुक्त मानिन्छ । कोरोनाबाट बच्न तुलसीको चिया नियमित सेवन गर्नाले लाभ मिल्ने आयुर्वेदका चिकित्सक डा वंशदीप शर्मा खरेल बत्ताउँछन् ।
आजका दिन भगवान् विष्णुको मूर्तिलाई रथमा राखी यात्रा गराउने प्रचलन पनि छ । रात्रिमा ‘गोविन्द उठ्नुस् तपाईँ सुते जगत् सुत्छ, तपाईँ उठे जगत् उठ्छ’ भन्दै शङ्ख, घन्ट र ढोल बजाएर विष्णुलाई जगाउने गरिन्छ । यसको प्रतीकका रूपमा मानवका पाँच ज्ञानेन्द्रिय र पाँच कर्मेन्द्रिय एवम् मन गरी एघार वटालाई जित्न उपयोग गरिने शास्त्रीय मान्यता छ ।
आजका दिन काठमाडौँ उपत्यकाका चार नारायण, भक्तपुरको चाँगुनारायण, ललितपुरको विशङ्खुनारायण, काठमाडौँका शेष नारायण र इचङ्गुनारायण स्थानमा विशेष मेला लाग्दछ । यहाँ जान नसक्नेले काठमाडौँको उत्तरमा रहेका बुढानीलकण्ठ नारायण स्थानको दर्शन गर्दा चारनारायणको दर्शन र पूजा गरे बराबरको फल पाइने विश्वास गरिन्छ । आजै देशभरका नारायण मन्दिरमा विशेष पूजा गरी यो पर्व मनाइन्छ ।
अस्ट्रेलियाले जित्यो विश्वकप क्रिकेटको उपाधि
एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउन प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र
कांग्रेसले बनायो महाधिवेशनका लागि विभिन्न समिती, कुन समितिमा को ? (नामावली सहित)
रञ्जु दर्शना एमालेमा प्रवेश !
बढ्यो हवाई भाडादर, कुन गन्तव्यको कति ?
बाढी पहिरो र डुबानबाट देशभर १२१ को मृत्यु, २८ बेपत्ता
तीनदिनको मौसम पूर्वानुमान : वर्षादेखि हिमपातसम्म
विदेशी नागरिकता लिईसकेका नेपालीलाई मताधिकार दिन सकिदैन : प्रधानमन्त्री देउवा
रोशनी शाहीले हालिन् भतिजीमाथि मुद्दा
वाणिज्य बैंकले माग्यो ८ सय बढी कर्मचारी (सूचनासहित)
तिमीले नचिनेर के भो र ?
कोभिडपछि पर्यटन पुनरुत्थानका लागि सरकारसँग माग